गगनसहित कस्ले-कस्ले ताके कांग्रेसको महामन्त्री,पदाधिकारी ताक्ने को-को ? - Nepal Tale | - Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, English news, Blogs and more.
गगनसहित कस्ले-कस्ले ताके कांग्रेसको महामन्त्री,पदाधिकारी ताक्ने को-को ?
काठमाडौं। कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा उठ्न चाहनेहरू एक दर्जनभन्दा बढी देखिएका छन् । दुई महामन्त्री पदका लागि संस्थापन पक्षबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाँण, एनपी सावद र विश्वप्रकाश शर्माले आकांक्षा राखेका छन् । संस्थापनइतर पक्षबाट चन्द्र भण्डारी, गगन थापा, गुरु घिमिरे, धनराज गुरुङ, बद्री पाण्डे, प्रदीप पौडेललायतका युवा नेताको पहिलो रोजाइ महामन्त्रीमा रहेको छ ।
पदीय हिसाबले सभापतिपछिको वरीयतामा उपसभापति भए पनि कांग्रेसमा महामन्त्री आकर्षक पद बन्ने गरेको छ । पछिल्लो पटक संशोधन गरिएको विधानमा सभापतिसहित १४ पदाधिकारीको व्यवस्था छ । जसमा दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, आठ सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्ष हुनेछन् । कोषाध्यक्षबाहेक सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुने नयाँ व्यवस्था यसै महाधिवेशनबाट कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । कांग्रेसमा उपसभापति पद नै थिएन । सभापतिपछि महामन्त्रीको व्यवस्था थियो ।
दोस्रो पुस्तामा नेता मीनेन्द्र रिजालले भने महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेर तयारी अघि बढाएका छन् । नेता महत भने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र अनुभवका आधारमा आफूलाई साथीभाइले सभापतिकै लागि प्रत्याशी बन्न दबाब दिँदै आएको बताउँछन् । ‘तपाईं कि त सभापति बन्नुपर्छ, कि त कार्यकारी प्रमुख नै हुनुपर्छ भन्ने सुझाव छ,’ उनले भने, ‘मेरो प्राथमिकता पार्टीभित्र समग्र एकता होस् भन्नेमा हो । नभए आफ्नो टिमभित्र एकता हुनुपर्छ, एकताका बखत म नै हुनुपर्छ भनेर अडान मैले राखेको छैन । तर, आफूभन्दा जुनियर सभापति हुने भए म पदाधिकारीमा उठ्दिनँ, सिनियरकै नेतृत्वमा बस्नुपर्ने भयो भने विचार गर्न सकिन्छ ।’
२०७५ पुसको महासमिति बैठकले पार्टी विधान संशोधन गर्दै कोषाध्यक्षबाहेक सबै पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरेपछि उपसभापति र महामन्त्री दुवै पदप्रति आकर्षण उत्तिकै रहेको नेता एनपी सावद बताउँछन् । पुरानो संरचनामा महामन्त्रीमा बढी आकर्षण भए पनि अहिलेको विधानले सबै पद निर्वाचनबाट आउने व्यवस्था गरेपछि उपसभापति पनि आकर्षक पद रहेको उनको ठम्याइ छ । यसअघि उपसभापति, एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री सभापतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्था थियो ।